Beenta hoggaanka al-Shabaab uu u sheego da’ yarta ismiidaamiyaan
Kooxda dhiig-cabtada ah ee al-Shabaab waxaa had iyo jeerba ay ku caddaatay inay askareeyaan carruur aad u da’ yar kuwaasoo ay si khasab ah uga soo wataan waaliddiintooda oo ay dabeetana ku xareeyaan xarumo ay maskaxda kaga baddalaan.
Waxaa xaqiiq ah in ay kooxdaani ay yaambo iyo katarabiil ay ka dhigteen dhalinyaro Soomaaliyeed oo aan wax la barin iyo dad waawayn oo maangaab ah iyo qaar kale oo nolosha ka dhacay.
Kooxdu waxaa mar walba lagu eedeeyaa inay mareen habaabiyaan carruur mustaqbal wanaagsan u noqon lahaayeen dalkeenna Soomaaliyeed, iyadoo waaliddiin badan ay sheegeen in si khasab ah looga wato carruurtooda.
Maxamuud Cabdi Cabdiraxmaan waa wiil dhallinyaro ah oo dhawaan lagu xukumay xabsi daa’in kaasoo isu dayay inuu qarxiyo munaasabad Ahlusunna ay ku maamuusayeen dadkii uga geeriyooday dagaalka ay kula jiraan al-Shabaab.
Maxamuud qaraxaas wuu ku fashilmay waxaana ciidammada amniga u suurta gashay inay qabtaan inta uusan weli qarxin goobtaas.
Wuxuu wiilkaan sheegay in ururka al-Shabaab ay been u sheegeen inuu jannada kula kulmi doono 72 haween xuurulceyn ah kuwaasoo kusoo dhaweyn doonaan jannada.
Waxaa sidoo kale loo sheegay inuu goobta uu qarxin doono ay ku sugan yihiin dad aan muslin aheyn iyo in hadduu guto waajibkaas uu jannada geli doono.
Waxaase layaab leh in hoggaanka sare ee al-Shabaab uusan ka qeyb qaadaneynin casuumadda ay carrurta u sheegayaan ee la kulanka 72-da xuurulceyn oo aysan iyaga laftooda ka qeyb qaadaneynin ismiidaaminta.